होलिको रंगले कपाललाई हुँदैन नोक्सान, फलो गर्नुहोस् यि टिप्स ! - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : आइतबार, चैत ०३, २०७५१४:४५ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
एजेन्सी, होली आउन अब केहि दिन मात्र बाँकी छ । मानिसहरुमा होलीलाई लिएर निकै उत्साह देखिन्छ । यस चाडमा मानिस विभिन्न थरिका रंगहरु एक-अर्कालाई दल्दै चाडको आनन्द लिन्छन् । तर यि रंगमा रहेका केमिकल्सले तपाइँको अनुहारको छाला मात्र नभएर तपाइँको कपाललाई पनि हानी पुर्याउँछ ।
प्राय मानिसहरु होलीको रंगमा रंगिने चाहाना हुँदा हुँदै पनि यहि हानीबाट सतर्क रहन रंगसंग खेल्दैनन् । तर चिन्ता नगर्नुहोस् आज हामी तपाइँलाई केहि यस्ता टिप्सहरु बताउन जाँदै छौँ जस पश्चात तपाइँ दिल खोलेर होली मनाउन सक्नु हुन्छ ।
होली खेल्नु पुर्व आफ्नो कपाललाई स्कार्फले पुरै ढाक्नुहोस् । यसो गर्दा रंग तपाइँको कपालको जरा सम्म जानबाट जोगिन्छ । स्कार्फ हाल फेशनमा पनि भएको हुँदा यसले तपाइँलाई सुन्दर पनि देखाउँछ र तपाइँको कपालको सुरक्षा पनि गर्दछ ।
होलि खेल्नु पूर्व कपालमा तेल लगाउनुहोस् । एक रात अघि नै तेल लगाएर मसाज गर्नु भयो भने निकै राम्रो हुन्छ । तेलले कपालमा प्रोटेक्टिभ लेयरको काम गर्दछ । जसले तपाइँको कपाललाई ड्यामेज हुन बाट बचाउँछ ।
यदि तपाइँको स्काल्प सेन्सेटिभ छ भने तेलमा कागतीको रस मिलाएर लगाउनुहोस् । यसले तपाइँको स्काल्पमा कुनै पनि खालको इन्फेक्सन हुन दिँदैन ।
पुरुषहरुको कपाल छोटो हुने भएर उनीहरुको कपालबाट सजिलै रंग निस्कन्छ भने महिलाको कपाल लामो हुने भएर उनीहरुको कपाललाई रंगले अधिक हानी पुर्याउँछ । त्यसैले लामो कपाल हेनहरुले आफ्नो कपाल बाँधेर नै राख्नु होला ।
होली खेल्दा कपालमा कुनै पनि हेयर एसेसरिजको प्रयोग नगर्नु होला । किनकी रंगको कारण तपाइँको कपाल यसै पनि उल्जिएको हुन्छ र यसले तपाइँको कपाल टुट्ने खतरा हुन्छ ।
होली पश्चात कपालबाट रंग कसरी निकाल्ने :
होलीमा तपाइँको कपालमा लागेको रंगलाई कहिल्यै पनि तातो पानीले नपखाल्नु होला । सधै चिसो या नर्मल पानीले आफ्नो कपाल पखाल्नु होला ।
केमिकल श्याम्पूको साटो कुनै हर्बल श्याम्पूको प्रयोग गर्नु होला । कपालमा लागेको रंग विस्तारै विस्तारै सफा गर्नु होला । तयसको लागी औँलाको माध्यमबाट हल्का गरि कपाल मसाज गर्नु होला ।
एलोभेरा जेलले आफ्नो कपाललाई मालिश गर्नुहोस् । १० देखि १५ मिनेट पश्चात कपाललाई पखाल्नुहोस् ।
होलीको रंगले कपाल निकै रुखो र नराम्रो देखिन्छ । कपाललाई कोमल बनाउनको लागी हेयर स्पा गराउन सक्नु हुन्छ ।
डा. भगवान कोइराला: “काठमाडौँ वासीले बानी सुधार्नुहोस्”
विषादी जाँच नगर्न भारतीय दबाब, भारतीय दूतावासले पत्र लेखेर नै जनायो आपत्ति
कोरोना भाइरसबाट विश्वभर १० लाख ३८ हजारको मृत्यु
भारतमा एकैदिनमा थपिए अहिलेसम्मकै अत्यधिक संक्रमित, मृतकको संख्या ६३ हजार ४९८ जना पुग्यो